Semalt: Tricks Spammers Sebenzisa Ukuphumelela?
UMichael Brown, i- Semalt , uthi akunandaba ukuthi uqaphele kangakanani, ugaxekile uzothola ama-imeyili ogaxekile njalo ebhokisini lakho lokungenayo. Yini enzima ukuyiqonda ukuthi abakwa-spammers baphatha kanjani ukuthola wonke amakheli e-imeyili. Nakuba ungathatha izinyathelo ezithile zokuvimbela, kuncane ongakwenza ngendaba - who are cloud computing providers. Ngokuhamba kwesikhathi, abakwa-spammers bahlale bethola indlela yokukuthola ikheli le-imeyili. Abasebenzisi bamane bahluleka ukuqonda isizathu salo mkhuba ononya.
I-Voxbox World Telecom Inc yaseCanada ayibhekwa njengenkampani enenzuzo. Noma kunjalo, abakwa-spamme babonakala bengakhathaleli ngalokhu. Ugaxekile ozibiza ngokuthi uFrancis uhlabelele le nkampani ngemilayezo yeposi. UFrancis wamane uthenge amasheya avela ku-Voxbox wabe esenquma ukuthumela imilayezo ye-spammy ukuthola umamukeli ohahayo futhi athengise amasheya akhe ngenzuzo.
Lesi sigaba samasheya "sokulahla nokupompa" sithandwa kakhulu. Ngisho noma unezihlungi zogaxekile, abagaxekile bahlale bethola indlela yokuzigwema ukuqinisekisa ukuthi ama-imeyili wabo ogaxekile anikezwe kumamukeli ohlosiwe. Bakhetha ukusebenzisa isu elibalulwe ngenhla ngoba libavumela ukuba baphumelele ngaphandle kokuba nezixhumanisi kwiwebhusayithi abaya kugaxekile. Konke abakudinga umlayezo ohlamba isitokisi.
Ucwaningo oluqhutshwa nguJonathan Zittrain, uprofesa we-Oxford University noLaura Frieder, uprofesa wophiko lwe-Purdue University, ubonise ukuthi isizathu sokuba abakwa-spammers baphumelele ukuthi lezi zikimu zisebenza! Uma konke kuhamba ngokuvumelana nesimiso, benza amaphesenti angama-5 abuyele ngesikhathi labo abakwazi ukuthenga i-stock yabo balahlekelwa cishe amaphesenti angu-7 okutshala izimali zabo.
Izindaba ezinhle ukuthi ungasebenzisa indlela elula kodwa ephumelelayo yokulahla abakwa-spammers. Okokuqala, kufanele ususe ugaxekile. Kungakhathaliseki ukuthi mnandi kangakanani futhi uzama umnikelo, yikuphi futhi ungathengi isitoko. Ngoba iningi labantu liyithenga ngoba nje abaqondi ukuthi ligaxekile. Futhi khumbula njalo ukuthi ukuzama ukwenza ibhola esheshayo kungaba ukudlala amaqhinga kuwe.